I-Lake Escape, i-opp lake, kufuphi nolwandle, i-kayaks yamahhala - I-Airbnb
I-Lake Escape, i-opp lake, kufuphi nolwandle, i-kayaks yamahhala
UKURHOXISWA KWAMAHHALA UKUBA AWUKWAZI UKUHAMBA NGENXA YOKUTSHO I-COVID-19.
Igumbi elinobunewunewu, hayi nje istudiyo, esihonjiswe kakuhle, ukufikelela ngasese kumgangatho ophantsi. Akukho mntu uphezulu.
I-kayak YAMAHHALA, iibhodi ze-boogie, izixhobo ze-snorkel, izixhobo zentenetya, iseti yepikiniki, izitulo zaselwandle, iambrela kunye neetawuli.
Igadi yabucala eneBBQ.
Ukuwela indlela eya eWallis Lake kunye neRecky Club.
2 Mins Blueys, Boomerang, Shelly & Elizabeth Beaches.
Ilinen kunye neetawuli zokuhlambela zibandakanya.
Iwasha kunye nesomisi kwiflethi enomgubo wokuvasa kubandakanywa.
Singathanda ukukwamkela kwiflethi yethu yangoku, ehonjiswe kakuhle kunye nezimeleyo ezimeleyo yeeholide. Le ndlu inomnyango owahlukileyo nowabucala, obekwe ngasemva kwipropathi. Yiza uhambe ngokuthanda kwakho.
Inegumbi lokulala elahlukileyo elinebhedi yokumkanikazi & nomabonakude, igumbi lokuphumla elineTV enkulu, ikhitshi, igumbi lokuhlambela, i-BBQ, igadi, indawo yokuhlamba impahla kunye nefriji enkulu. Kunye neshawari yangaphandle esanda kwakhiwa - ukuba ufuna ukuhlamba isanti kusuku lolonwabo kunye nemisebenzi elunxwemeni nasechibini.
Indawo esikuyo yiyo eyenza ukuba ikhetheke kakhulu. Singaphaya kwendlela esuka eWallis Lake kwaye kukho iikayak ezifumanekayo ukuba unqwenela ukuya emanzini ukuze ufumane iphini lokubheqa-nokuba kabini okanye elinye. Kukwakho nenkundla yentenetya ekuqeshwa kuyo ngaphaya kwendlela - sibonelela ngokusetyenziswa simahla kweereyithi zentenetya kunye neebhola.
I-Pacific Palms Recreational Club (eyaziwa ngokuba yiRecky) ingaphaya kwendlela ukuba uziva ngathi usisiselo okanye amava okutya. Akukho maxhala malunga nokuqhuba utywala.
IiMarike zePalms zibanjwa ngaphaya kwendlela ngeCawa yokugqibela yenyanga nganye kwaye kabini ngenyanga ngeeholide zesikolo.
Uninzi lweendawo zokutyela ezikufutshane kunye nokuhamba nje okufutshane zezinye izinto ozithandayo, ezinje nge'Kembali' kunye 'neMoby's' kunye nezinye ezininzi.
Elizabeth, Shelly, Blueys & Boomerang Beaches yimizuzu nje kude. Yonke into oyifunayo kwikhefu elikhulu kude nesixeko.
I-Shelly Beach yeyona ndawo ilungileyo ye-snorkel. Sibonelela ngeeseti ezi-2 zezixhobo zokukhwela i-snorkelling - imaski, amaphiko kunye ne-snorkel. Sikwabonelela ngePakethi yoBuya yePiknikhi kunye nombhoxo wepiknikhi enayo yonke into oyifunayo kwipikiniki. Yongeza nje ukutya nesiselo!!
Ukuba uza emtshatweni, sikuhambo lwemizuzu nje embalwa ukuya kwiGreen Cathedral kunye nokuhamba kancinci ekhaya ukuba ulwamkelo lukwiPasifiki Palms Surf Club.
Sikwabonelela ngeebhodi ze-boggie ezi-2, izitulo zaselwandle ezi-2 x, iitawuli ezi-2 zolwandle kunye ne-ambrela yaselwandle.
Ipaki yesizwe yaseBooti Booti ikulungele ukuhamba kunye nokuhamba ixesha elide. Uhambo lwemizuzu nje ukusuka eflethini. Sibonelela ngeseti yepikiniki kunye nombhoxo wepiknikhi ukuba ufuna ukwenza ipiknikhi kwiindawo ezininzi ngaphesheya kwePaki yeSizwe.
Irempu yesikhephe ingaphaya kwendlela kunye nejethi. Yiya kuloba, i-kayaking okanye uphakame ukhwele i-paddle boarding. Kanye ngaphaya kwendlela.
Sikwanyuke ngendlela esuka kwiGreen Cathedral kwaye sijikeleze ikona ukusuka kwiPacific Palms Surf Life Saving Club okanye iMobys Retreat ukuba sizimase umtshato nakweyiphi na indawo.
I-Forster/Tuncurry ikumgama wemizuzu engama-20 kwaye iSeal Rocks kunye neSugarloaf Lighthouse ziyafana kwelinye icala. Indawo egqibeleleyo kuwo wonke umsebenzi.
Indlu yabucala inesango lokungena elahlukileyo, igumbi lokulala elahlukileyo elinobukhulu bendlovukazi kunye ne-TV yescreen esicaba, igumbi lokuphumla / igumbi lokuhlala elineTV yescreen esicaba kunye nendawo yokutyela, indawo yangaphandle, i-BBQ, ikhitshi elibandakanya isitovu samawele, ifriji, imicrowave, itoaster, iketile, ikofu. plunger, isitovu saseTaliyane siphezulu umenzi wekofu (zisa nje ikofu oyithandayo), imbiza yeti kunye nazo zonke iimbiza, iipani, iipleyiti, izinto zokugalela njl.njl ozifunayo ukuba unqwenela ukutya kuyo. Kwakhona umatshini wokuhlamba kunye nesomisi.
Sibonelela ngeti, ikofu ekhawulezileyo, iswekile, ityuwa kunye nepepile, kunye nazo zonke iimfuno zakho zelinen ezibandakanya iitawuli zokuhlambela & zaselwandle, iitawuli zeti, iimathi zokuhlambela, ukuhlamba umzimba, ukuhlamba izandla, iphepha langasese, itawuli yephepha, i-napkins, iwashing powder, & ulwelo lokuhlamba izitya.
Zisa nje ukutya kwakho, utye kwiKlabhu engaphaya kwendlela okanye kwiindawo zokutyela ezinkulu ePasifiki Palms okanye eForster/Tuncurry. Sikwabonelela nge-intanethi yasimahla ngoqhagamshelo lweWi-Fi.
Iindwendwe zinokungena okwahlukileyo kwiflethi yabucala enegadi yazo yangasemva kunye nendawo yokonwabisa yangaphandle.
Ukufikelela ngecala lasekhohlo lendlu.
Ishawari yangaphandle yaseTropiki ekhoyo ukuze isetyenziswe emva kwemisebenzi yangaphandle.
Ukupaka ngaphandle kwesitrato.